Olee ebe ị chọrọ ịga njem na a mmiri? - Jomo Technology Co., Ltd
Spring na-abịa n'oge na-adịghị, ga-amasị gị na-aga na a njem n'oge ọ bụla? Ma ọ bụ chọrọ ịga na ịchọpụta ụwa dị iche iche? Ị chọrọ na-enye onwe gị ma ọ bụ ezinụlọ otu nnukwu okè ezumike?
Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, biko họrọ a anwụ na-acha ụbọchị ịga, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwetaghị na-atụghị anya mma na njedebe nke gị na njem.
Otú ọ dị, e nwere otu ajụjụ, nke ụdị njem ị na-ahọrọ na-ahọrọ, ụgbọelu ma ọ bụ ịzụ? Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ, mgbe ị bịarutere a na njedebe nke a njem, ị chọrọ onye magburu onwe mkpụmkpụ-anya iga. Ma nke mkpụmkpụ-anya njem na ngwá ọrụ bụ ihe kasị mma?
N'oge ndị a, Electric skateboards dị nnọọ ewu ewu na ọtụtụ ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke. Ọ bụghị naanị na a mma na-aga aga na ngwá ọrụ ma na-n'ezie nwere ike na-adọta ndị mmadụ n'anya. China Koowheel 2 ọgbọ electric longboard (Dual brushless ehiwe-Motors) nwere replaceable batrị mkpọ, 2pcs batrị ngwugwu nwere ike adịru 60km, na-aga ogologo. Ya nkịtị na-agba bụ 30km / h, n'elu ọsọ 42km / h, na-aga ngwa ngwa. (dabere na ahu arọ na ụzọ ọnọdụ) E wezụga, nke a bụ ihe electric skateboard mma n'ihi Air njem, ị nwere ike iche banyere n'ụgbọelu nsogbu mgbe nile.
Ọ bụrụ na ị na-a ejiji girl ma ọ bụ nwa na-enweghị, weta electric skateboard bụ gị nhọrọ kasị mma. Ị pụrụ ịmalite inyocha ụwa a n'oge ọ bụla na-enwe ebe ndị mara mma na-aga. Na-achọ gị nwere obi ụtọ na dị iche iche na njem na a mmiri.
Post oge: Feb-28-2018